Ukubandakanywa kwimiba yentlalo kwiinkqubo zoqeqesho lobugcisa - ii-Geofumadas
Ukubandakanywa kwimiba yentlalo kwiinkqubo zoqeqesho lobugcisa
Epreli, 2013 Ukufundisa i-CAD / GIS, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Le veki ndiyathetha nomnye wabambisene bam, kwaye senza imbali ethile malunga neenwele ezimpunga ezithathile kule nkqubo yophuhliso -okungaphezulu kwam kunokuba uxhasa i-bald yakhe-.
Ndacacisa ukuba ukuziphendulela kwam iziphazamiso zam bangela ukuba ndiguqulwe kwintsimi yobugcisa ukuya kwiNjineli ke kwizentlalo; Ndisoloko ndikhangela indlela yokufumana iimfihlo kwizinto ezintsha zobuchwepheshe. Kwesinye sezigqibo zakhe wandikhumbuza ibinzana ayelifunde apho, ukuba abafundi abangafundileyo bexesha elizayo baya kuba ngabangakwaziyo ukufunda nokutshintshelwa utshintsho.
Ukuba kukho inzuzo kwintsimi yentlalo, kukuba ufunda ezininzi malunga nokuqonda abantu. Ingaba siya kusebenza kwinkqubo yobugcisa, yolawulo okanye yophuhliso; Ukwazi ukuba abantu basebenze kubalulekile. Kule meko ndifuna ukubhekisela kwiinkqubo zokufunda-ukufunda; ngendlela endibetha ngayo incoko yeklasi endiyifunayo kwaye ndiyongeza enye into echazwe kwisiza apho ndibhalela rhoqo.
Kubaluleke kangakanani ukuphathwa kwezentlalo kunye neenkqubo zokufunda-zokufunda?
Kungenzeka ukuba esinye sezizathu zokuba iinjineli zingagqiba ekubeni ngabafundisi ababi kukuba zibona ezimbalwa izibonelo ze-didactics ezisetyenziswa kakuhle. Ndiyakhumbula ukuba ngaba ngabafundisi bezobugqirha kodwa bengakwazi ukuthumela; umzekelo, omnye wabo owayecaphukile ngenxa yokuba simbiza ngokuba ngumfundisi.
- Kwandithatha iminyaka eyi-11 ukufumana ubunjineli, amakhosi kunye nodokotela. -sithi ke nceda ungandinciphisi kwinqanaba lootitshala.
Inani elihle leengcebiso ezizalwe kwezi ngqondo zenze ukuba sicinge ukuba njengonjineli sasiye kwiklasi elincinane kwisebe lezinto ezintsha; ukudibanisa indima ngolwazi nokuvunywa. Nangona sifunde ukusebenzisa ulwazi olungenakuthetha ukuba lukhethekileyo, ukungafumani isimo sengqondo sokuzithemba okuzenzeke ngokugqithisileyo kunye nokuzikhukhumeza kunokusithatha isiqingatha sobomi.
Ngoko ukuba abafundisi beenkundla zobunjineli abazange bagxininise ekuzaliseni uqeqesho lwabo lokufundisa, baya kuba nokukhawuleka okukhulu ekuhanjisweni kolwazi kunye nokonyango lwabafundi njengabaxhasi beenkonzo zabo. Nangona kufuneka ndicacise ukuba abanye bazalwa ngabafundisi, kwaye isihlalo sakhe sasiyinto elula.
Ekugqibeleni, ukufundisa kwabo kulungile kwimibandela yobugcisa, kodwa ububanzi bayo buhlala kwinqanaba lemveli nje ngokuba bengaphumeleli ngokwazi izinto ezintle ze-didactics kunye neendlela ezihlukeneyo kunye neendawo zokufunda ezisetyenziselwa i-psychology yokuziphatha ebona ukufundisa ngaphezulu inkqubo eyenziwa yimveliso elula.
Kutheni abantu befunda?
Inkokhelo yam enkonzweni yemfundo yezobugcisa yaqala xa ndifundisa Inkqubo ye-AutoCAD. Ndimele ndivume ukuba iimpazamo zadlulile, phantse kuninzi umonde wekhontrakthi yam.
Enye into kukuba ukwakha script methodological omnye nokuqinisekisa iingqikelelo zabafundi ziyafezekiswa phantsi iinjongo zethu. Phakathi kwezinto nzima inkqubo baba: ukuba abafundi beza ukuhlangabezana nemfuno ukufunda iimpawu ezintsha AutoCAD ukusuka kuguqulelo yangaphambili nje, abanye wayithimba kuba kulindeleke ukuba uyiyeke njengomthombo wengeniso, onento abaselula Internet oomatshini kunye abadala nzima ukubazi ivili le mouse.
Ngoko ukukhangela kwangikhokelela ukuba ndifake i-buildacist doactic, ukufunda i-32 imiyalelo onokuphuhlisa izicwangciso zendlu; ukushiya iinkalo zokugqibela ezinzima ezifana nesithuba sephepha kunye nokunikezelwa kwe-3D. Ekugqibeleni emva kokuphinda amaxesha amaninzi abafundi bafunde ukusebenzisa i-AutoCAD kwaye ndafunda indlela abantu abayifunayo ngayo, kwaye ayifundiswa njani kutheni abantu befunda.
Ezinye zezi zinto ziquka ukufunda okuningi, ukuphuma kwisiqendu kunye nokwamkela ukuba umfundi ungumnini wolwazi onokwakha ulwazi olutsha. Ngokusekelwe kolwazi oludlulileyo lwabafundi, lukhokelwa ukwenzela ukuba abafundi bakwazi ukukwakha ulwazi olutsha kunye nolwazi olubalulekileyo, kuba ngaba ngabadlali abakhulu bokufunda kwabo, -nangona uthi kulula-.
Kodwa kunjalo; Abantu bafunda kuba bafumana umkhiqizo kunye nenkqubela kwinto abayifumanayo. Bafunda ngenxa yokuba bayaqonda ukuba ulwazi olutsha lube ne-scaffold ekunyuka kuyo. Bafunda ngokuba ngaphandle kokufundiswa ngokuzikhethela, umdla ngamnye uhamba.
Indlela yokufunda-inkqubo yokufunda iguqukela ngayo
Ukuqonda abantu ngenye yezindlela ezingenakuguquka kumxube okhoyo ngoku uquka ulwazi lokudala. Iindaba zentatheli zedijithali ngaphandle kokuba zenze umsebenzi zibafundi abaninzi kunezo zendabuko, kungekhona ngenxa yokuba baneeblogi ezithandwayo, kungekhona ngenxa yokuba zibandakanya kwiintanethi zentlalo, kodwa ngenxa yokuba amava abenze ukuba baqonde abantu abaninzi njengabantu.
Kwintsimi yokufundisa, into efanayo iya kwenzeka ngokukhawuleza. Ixesha liya kuza ukuthengisa incwadi malunga nendlela yokufunda i-AutoCAD iya kuba yintsebenziswano ephazamisayo, ngokuba i-Intanethi iyatshisa ulwazi olwaneleyo lokufunda. Umngeni wabafundi baya kuba nokukwazi ukuhambisa ulwazi, ekufudukeni kweendawo zokufunda ukuya kwiindawo zokulawula kakuhle ulwazi; Umngeni onokungathandabuzeki ukuba awuyi kuba lula.
Ukuba abantu bafunde i-AutoCAD ngokusebenzisa iividiyo kwiYouTube baya kudala izikhewu ezazingekho kwisitulo semveli, kodwa akukho nto ishiyekileyo kodwa ukuziqhelanisa nale meko. Ulwazi lwentando yesininzi lubeka emngciphekweni, kodwa qho xa lwenzekile inguquko ebalulekileyo emhlabeni. Ihleli ngoku ukubona ukuba kuya kwenzeka ntoni kuleyo ifikelele kwinqanaba lokuba kuthiwe "yiminyaka yolwazi."
Ekugqibeleni, isiphumo esiza kuzisa ukuvuleka kolwazi olwenzayo njengamajelo edijithali luya kuba yinto enqabileyo engapheliyo ukuba ngoku asiyazi. Kodwa ngokuqinisekileyo kuya kuba nemfuneko kwaye kufuneka ukuba baqonde abantu abaya kubakhokela ootitshala ukuba bafune izixhobo ezingcono, ubuchule kunye neemodeli ezivumelaniswe nezimo zehlabathi.
Isiphakamiso sokugqibela sisisiseko kwaye silula; Kufuneka ufunde ukungafumani. Kwinqanaba esinokufumana ngayo izakhono zokuguqula, siya kuba nako ukufumana iziphumo ezingcono nje kuphela ukulungelelanisa utshintsho, kodwa nakwizinto eziphathekayo eziphathekayo ngokuqinisekileyo; kuba njengobunzulu njengedemokhrasi yolwazi okanye isisiseko njengesizukulwana semali.
Post edlulileyo«Edlulileyo Yintoni into entsha ye-gvSIG 2.0 ebonisa
Post Next MundoGEO # Xhuma i-2013, yonke into ilungileOkulandelayo "